Mid ka mid ah dhallinyarada Somaliyeed ee Maraykanka Uga tagtay Al-shabaab oo ka waramay saaxiibkii oo lagu qasbay inuu isku qarxiyo Hargeysa sanandkii 2008 | Berberanews.com
Mid ka mid ah dhallinyarada Somaliyeed ee Maraykanka Uga tagtay Al-shabaab oo ka waramay saaxiibkii oo lagu qasbay inuu isku qarxiyo Hargeysa sanandkii 2008
October 10, 2012 | Published by: Maax
Washington-(Berberanews/W.post)- Shirwac Axmed oo wuxuu ka mid ahaa kooxdii qaraxyada ka fulisay sannadkii 2008 Madaxtooyadda, Xarunta UNDP iyo Safaaradda Itoobiya oo ay ku dhinteen sodomeeye qof, kaasoo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee Maraykanka ku noolaan jiray ee Al-shabaab u gacangalay, kaasoo haatamn la ogaaday inaanu Shirwac raalli ka ahayn falkaas, balse Al-shabaab ku khasabtay.
Sida uu Wargeyska Star Tribune oo ka mid ah wargeyskayada kasoo baxa dalka Maraykanka faafiyay Saalax Cusman Axmed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka bar bar dagaalamay Al-Shabab oo haatan maxkamadu kaga socotio Maraykanka, ayaa daboolka ka qaaday in isaga iyo saaxiibkii Shirwac oo isagu isqarxiyay ay majara-habaabisay kooxda Al-shabaab oo ka dhaadhicisay inay la dagaalamayaan ciidmmada Itoobiya oo dalkooda ku soo duulay.
Saalax Cusman Axmed waxa uu maxkamadda horteeda ka sheegay in saaxiibkii Shirwac ka hor intii aanu is qarxin uu damacsanaa inuu Maraykanka ku laabto oo uu faraha kala baxo hawlaha Al-Shabab oo aanu ku qancin.
Saalax waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee Maraykanka ka soo tagtaa aanay ujeedadoodu aheyn inay Al-Shabab ku biiraan hase ahaatee ay waday qadiyad inay la dagaalamaan ciidamada Ethiopia oo xilligaas Soomaaliya kula dagaalamayay ciidamadii maxkamadaha Islaamka.
“Waxay aheyd xilli lagu gudo jiro bisha barakaysan ee Ramadan waxaana u soconay inaan la dagaalanno ciidamada Ethiopia oo Soomaalidu cadowga u aaminsan yihiin laakiin ujeedkeenu ma aheyn inaan ku biirno argagixisada” ayuu yidhi Salax Cusman Axmed oo maxkamada ka hor hadlayay.
“Wuxuu ku jiray xero ciidamada lagu tababaro waxaana uu damacsanaa inuu Kismaayo noogu yimaado waxaana uu sheegtay inuu xanuunsanayo oo uu doonayo inuu is-daweeyo laakiin arrintaas waa laga diiday kadibna hogaamiyaasha Shabab waxay ku qanciyeen inuu is qarxiyo” ayuu sidoo kale Saalax yiri asagoo xiran dharka maxaabiista ee midabkiisu Oronjaha yahay.
Saalax waxaa uu sidoo kale tilmaamay inay jiraan dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo qurbaha ka tagay kadibna markay Soomaaliya tegeen la dilay markii ay amarro la faray diideen isaguna uu ka baxsaday Shabab waxaana hadda loo haysta dambiyo ay ka mid yihiin inuu wax ka ogaa dhalinyarada Maraykanka ka timid ee Soomaaliya tegay.
Shirwac Axmed oo 26 sano jir ahaa ayaa bishii October ee sanadkii 2008 waxaa uu isku qarxiyay dhismo ku yaala deegaanada Puntland.
Illaa iyo 20 dhalinyaro Soomaali ah ayaa la sheegaa inay Maraykanka ka yimaadeen kadibna ay ku biireen dagaalyahanada Xarakadda Al-Shabab.